Mayelana NATHI - Fujian Joborn Machinery Co., Ltd.
I-Fujian Joborn Machinery Co., Ltd. itholakala e "China stone city" -china, shuitou, ithatha indawo engaba amahektare angama-60, enamamitha ayisikwele angaphezu kwezi-20 000 ezitshalo ezijwayelekile zanamuhla nangaphezulu kwamamitha-skwele angama-4000 esakhiwo sokuphatha, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokusebenza komunye wemishini yokukhiqiza itshe. Kuqongelelwe ulwazi oluningi, ubuchwepheshe obumnandi kanye nezinsizakalo ezizungeze amabanga zero ukuqinisekisa ukuthi inkampani ithola idumela elihle lemakethe.
Imikhiqizo eyinhloko umshini wokusika ibhuloho i-SQC450 / 600 / 700-4D ,, umshini wokusika ibhuloho ophakathi, SQC2200 / 2500 / 2800-4D umshini wokusika ibhulokhi, umshini we-SQ / PC-1300 okhethekile owenziwe ngomshini, umshini wokuphrinta we-SPG resin othomathikhi umshini njalonjalo. Ikhwalithi yokuqala inhloso yenkampani yethu inkampani isungule uMnyango wokulawulwa kwekhwalithi wochwepheshe, onemishini yokulinganisa esezingeni eliphakeme, inqubo yokuhlola eqinile, kusukela ekuthengeni izinto ezingavuthiwe kuya kugcina lomkhiqizo ophelile; izinqubo ezahlukahlukene zilawulwa ngokuqinile, ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ekhiqizwayo iphakeme.
Inkampani igcina umoya wokuthi "phambili ngabantu, yonga ngekhwalithi, iwine ngokuhle kakhulu, okusha ngesibalo", enkampanini ezayo izohlinzeka ngobuchwepheshe bezobuchwepheshe kanye nesimo sengqondo njalo sithuthukise ikhwalithi yensizakalo ibe namandla "eChina yokukhiqiza. 2025 ", yokuvuselela ukukhiqizwa kwemishini yamatshe yaseChina nemizamo engakhathali.
JOBORN Imishini uye wakha iqembu lochwepheshe abanolwazi olunothile ekukhiqizeni imishini yamatshe. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-20, imishini yamatshe engaphezu kwengu-60,000 yokukhiqiza ulwazi olucebile nokuqongelelwa kwezobuchwepheshe inike amandla ubuchwepheshe benkampani ukuthi buhlale buhamba phambili kontanga yayo, benze inzuzo kwezobuchwepheshe bokukhiqiza, futhi ibonakalise Ngokushesha ubuchwepheshe bamuva bokucubungula itshe nezidingo zamakhasimende ukukhiqizwa kwemikhiqizo, ukwenza ubuchwepheshe nemikhiqizo phambili embonini.
Imishini yeJoborn egcina umoya webhizinisi lesisekelo esithi "phambili ngabantu, londoloza ngekhwalithi, uwine ngokuhle kakhulu, okusha ngesibalo". Thatha ukufunwa kwamakhasimende njengesikhungo, thatha ukwaneliseka kwamakhasimende njengendawo yokuqala, ngejubane lokuqala, ubuchwepheshe besigaba sokuqala, isimo sengqondo sokuqala ukufeza "ukweqa okulindelwe ngamakhasimende, ngaphesheya kwenhloso yensizakalo ejwayelekile", unikeze amakhasimende nge-pre ephelele -sale, ukuthengisa, yonke inqubo yesevisi yangemva kokuthengisa.